Nezvedu - Wuxi Qianduo Packaging Technology Co, Ltd.
Hdpe uye PET mabhodhoro emishonga anoshandiswa kurongedza zvigadzirwa zvekuchengetedza hutano, chikafu, zvekuwedzera zvemitambo, makapisi, mapiritsi uye mapiritsi, mabhodhoro ezvekuzora anoshandiswa kurongedza kirimu, latex mafuta, nezvimwe.
Wuxi qianduo kavha michina Co., Ltd. iri kuita mishonga uye utano chikafu epurasitiki kavha mabhodhoro nyanzvi kugadzirwa emakambani, kambani inovhara nzvimbo 28000 mativi metres, kuvaka nzvimbo 16000 mativi metres, izvo 100000 mugiredhi yokuchenesa workshop 6000 mativi metres. , iwo muyero wefomu yakakwana seti yekuchengetera nzvimbo ye6000 mativi emamirimita, kutsvagisa nekusimudzira uye yemhando yekutarisa nzvimbo inovhara nzvimbo ye300 mativi emamirimita.
Hdpe uye PET mabhodhoro emishonga anoshandiswa kurongedza zvigadzirwa zvekuchengetedza hutano, chikafu, zvekuwedzera zvemitambo, makapisi, mapiritsi uye mapiritsi. Zvizoro mabhodhoro zvinoshandiswa kurongedza ruomba, latex mafuta, nezvimwewo. Isu tinopawo OEM sevhisi, senge kugadzira nyowani kuumbwa uye kudhinda logo seyakagadzirwa yevatengi.
Ane nyanzvi yekutengesa uye yehunyanzvi mhando manejimendi timu, mukufamba kwekukura, inopa kune vese vatengi iyo yepamusoro mhando chigadzirwa, yakanaka yehunyanzvi rutsigiro, yakakwana mushure-yekutengesa sevhisi, ine mukurumbira wakanaka, hwakavimbika mhando, inonzwisisika mitengo, kuhwina ruzhinji yevatengi vatsva nevakuru inowirirana yakakwira kurumbidzwa, ive mishonga yekupakata mabhodhoro epurasitiki, indasitiri leader.Through kutsvaga uye kusazvipira kuedza kwevanhu, zvakanyanya uye zvakanyanya anozivikanwa anozivikanwa mabhizinesi anotiziva isu nekumisikidza inogara yekudyidzana hukama nesu.
Isu tinogara tichitevedzera kutendeseka kwetsika yekilu, kumushandisi senzvimbo yemazuva ano ebhizinesi tsika yakakosha tsika, ine chinangwa chinangwa, nekuvandudza kubatana, kuwedzera kunaka nehunyanzvi, kuvaka simba netsika, kutsunga kuenda nenzira indasitiri yehutano, parizvino ine PE, PP, PET bhodhoro, nhema simbi UV kavha, desiccant, kunyora uye zvichingodaro kune akati wandei makuru mabhizimusi chikamu.
Yakazvipira kupa zvirinani masevhisi, yakaderera mitengo
Tinokugamuchira nemoyo wese kuti ubatane nesu.